Ergamaan addaa Pireezidant Baayidan Ministira Haajaa Alaa Itoophiyaa waliin mariyatan - BBC News Afaan Oromoo
Ergamaan addaa Pireezidant Baayidan Ministira Haajaa Alaa Itoophiyaa waliin mariyatan
Dhimma naannoo Tigraay irratti yaaddoo jabaa pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayidan qaban ibsuuf gara Itoophiyaa kan imalan michuun isaanii Senaatar Kiriis Koons Sanbata sa'aa booda Finfinnee galuun aanga'oota waliin marii eegalan.
Miidiyaan biyyaalessaa Itoophiyaa EBC'n akka gabaasetti ergamaan addaa Pireezidant Baayidan Senaatar Kiriis Koons Sanbata kaleessaa Ministara Muummee itti aanafii Ministira haajaa alaa kan ta'an obbo Dammeqee Mekonniin waliin mariyataniiru.
Dubbiii himaan Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Amb. Diinaa Muftii ibsa EBC'f kennaniin ka'uumsaafi haala qabatamaa rakkoo naannooo Tigraayitti dhalatee jila Seenaatar Kiriis Koonsiin durfamutti haalaan ibsuu dubbatan.
''Ka'umsa seera kabachiisuu naannoo Tigraay, adeemsa isaafi galmi isaa maala akka ta'e, yeroo ammaa Tigraayiin deebisanii ijaaruu, haalota wayyeessuufi kaan irrattis bal'inaan hubachiisaniiru'' jedhan Amb. Diinaan.
Yeroo dhiyoon as mootummaan dhaabbileen deeggarsa namoomaa kennaniif haal duree tokko malee hayyama kennuu, akkasuma miidiyaaleen idila addunyaas akka gabaasan hayyamuunis ibsameeraaf jedhan.
Pireezidant Joo Baayidan dhimma Tigraay irratti Itoophiyaatti ergamaa addaa erguuf
'Duguuggaan sanyii Tigraay keessatti raawwatamaa jira' - Antonii Biliinken
Sarbama mirgaa namoomaa naannichatti raawwatameera jedhamu ilaalchisee mootummana gaafatamni akka jiraatu hojjechuuf kutannoo qabaachuunillee ibsameera jedhan.
Ministirri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoniiy Bilinken yaada torban lamaan dura kennaniin naannoo Tigraay keessatti ''duguuggaan Sanyii raawwatameera'' jedhanii mootummaan Ameerikaa haala kanaan akkaan yaadooo qabaachuu dubatanii turan.
Dabalataaniis waraannii Eertiraafii milishaan naannoo Amaaraa Tigraay gadhiisanii akka bahan gaafatanii turan.Amb. Diinaa komii fi yaada Biliinkeen kanaaf deebii mootummaan qabu BBC'tti yoo human hariiroo biyyaalee keessatti sararri diimaan akka hin darbamne eegamu jira ''dhimma keessoo fi birmadummaa keenyarratti gidduu seentummaa hin hayyamnuu'' jedhan.
''Wantoota hin sirratiin waliin sirreessuuf mootummaan Itoophiyaa fedha qabu ibsuun, mariin ijaaraan godhameera'' jedhan.
Jila Senaatar Kiriisiifis ''dhimmi milishaa biyya keessaa akka qaama alaatti ilaaluufi dhimma keessoo irratti gidduu seenuun fudhatama kan hin qabne ta'uun ibsameera'' jedhan.
Marii kana ilaalchisee gama mootummaa Ameerikaarraa hanga ammaatti ibsi bahe hin jiru. Gorsaan Nageenya Biyyaalessaa Waayit Haawus Jeek Solivaan turan dhimma naannoo Tigraay keessa jiru ilaalchisee Senaatar Kiristoofar Koonsi Itoophiyaatti ergamaa jiraachuu Kamisa darbe kan ibsan.
Jeek ergaa tiwiitara gubbaatti maxxansaniin senaatarri warra Dimookraatotaa amanamaan kun gara Itoophiyaa imalaa kan jiraniif gaaffii pireezidant Joo Baayidan irraa dhiyaateen ta'uu ibsan.
Kayyoon isaa ammoo Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad waliin wal arguun ''yaaddoo akkaan jabaa rakkoo namoomaafi sarbama mirga namoommaa Tigraay irratti Pireezidant Baayidan'' itti jiran dhiyeessuudha jedha ibsi gorsaa nageenya biyyaalessaa US.
Yaaddoon pireezidant Baayidan haalli naannoo Tigraay keessa jiru kun Gaanfa Afrikaa gara tasgabbii dhabuu guutuu ta'eetti geessa kan jedhu of keessaa qabaa jedha ibsichi.
Ergamaan addaa Baayidan seenatar Kiristoofar Koonsi yaaddoo Baayidan kana mootummaa Itoophiyaaf dhiyeessuun cinatti, Gamtaa Afrikaa waliin dhimmoota waloo biyyootaa akka nageenyaafi badhaadhinaarratti ni mariyatu jedhame.
Lola Tigraay: Mootummaan Itoophiyaa 'Ameerikaan dhimma keessoo kootti galuu hinqabdu' jedhe
Lola Tigraay: 'Qaamoleen nageenyaa mirga dhala namaaf wabii dhaabbatan Tigraay seenuu qabu'-US